Paxful Àkpà ego Bitcoin
Nweta akpa ego Bitcoin echekwabara n'efu
Ụzọ dị mfe ma dịkwa mma iji zụta, ree, zipu, na ịchekwa Bitcoin gị.
bụ ụzọ echedoro ma dịkwa mma iji jikwaa ego gị. Debanye aha taa ma chọpụta n'onwe gị ihe kpatara nde mmadụ ji atụkwasị anyị obi.
Nweta akpa ego Bitcoin n'efu
Akpa ego Bitcoin ị nwere ike ịtụkwasị obi
Ihe karịrị nde mmadụ 3 ejirila akpa ego Paxful ziga ma nata karịa 40,000 BTC. Ihe nchekwa ya kachasị mma na eme ka ọ bụrụ otu n'ime obere akpa ego atụkwasịrị obi n'ụwa - yabụ na ị gaghị ahọrọ n'etiti nchekwa na mma.
Akpa ego Paxful a na arụ ọrụ, dị nchebe, na mfe iji na ngwaọrụ gị niile. Ị nwere ike ijikwa ego gị wee tinye kwuo site na ebeahịa esi n'otu ọgbọ efere n'otu ọgbọ, ma zipụ ma ọ bụ nata Bitcoin, na opipi ole na ole.
0% Enweghị ụgwọ ọrụ
6,000,000 Ndị ahịa nwere obi ụtọ
+2,000,000 Akpa ego Paxful
Ma ejighi n'aka? Anyị ma. Ndị a bụ ụfọdụ ihe kpatara ị ga eji nweta akpa ego Paxful.
Na Paxful, anyị ji nchekwa nke ego gị kpọrọ ihe. Nyochaa anyị siri ike na paswọọdụ chọrọ n'ejide n'aka na ọ bụ naanị gị nwere ohere ịnweta ego gị.
Nwee nnwere onwe nke ụzọ 300 ịzụta ma ọ bụ ree Bitcoin gị. Ebeahịa esi n'otu ọgbọ efere n'otu ọgbọ anyị na ejikọ gị n’enweghị nsogbu na naanị gị na ndị mmadụ dị ka gị.
Nweta ego gị nke ọma na ebe ọ bụla, n'oge ọ bụla. Ekele maka ike igwe ojii, ị gaghị efu ego gị ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ngwaọrụ gị efuo.
Ndị ọrụ anyị hụrụ anyị n'anya!
Lee ihe ndi mmadu kwuru banyere anyị.
Dị ka a hụrụ na...
Nweta akpa ego Bitcoin Paxful gị ugbu a!
Zụọ ahịa ozugbo, ma zụta Bitcoin na enweghị nsogbu taa!
Debanye maka akpa ego gị n'efu